Izindlu ezizinzileyo: uyilo, iimpawu kunye nezinto eziluncedo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IsiJamani sasePortillo | | Ikhaya eliGreen
Enye yezona zinto zibalulekileyo kwicandelo lokuthengisa izindlu nomhlaba ukunciphisa ifuthe kwindalo esingqongileyo kunye nefuthe lotshintsho lwemozulu yile izindlu ezizinzileyo. La ngamakhaya aneemathiriyeli zendalo kwaye asebenzise iinkqubo ezinokuphinda zisebenze kwaye zibonelelwe ngamandla acocekileyo. Ukongeza, olu hlobo lwezindlu luququzelela eyona ndlela yokuphila ihloniphekileyo kunye nokusingqongileyo, oku kuguqula ekunciphiseni ubume bendalo.
Kule nqaku siza kuchaza yonke into ofuna ukuyifumana malunga neempawu kunye nokwakhiwa kweebhokisi ezizinzileyo.
2 Izinto zokwakha izindlu ezizinzileyo
3 Ukusebenza kwamandla kwezindlu ezizinzileyo
4 Uninzi lweemodeli ezisetyenzisiweyo
4.1 Uqalo luqhakaza
4.2 Ukuwa kwendlu
Ukuze sikwazi ukuthetha ngezindlu ezizinzileyo ngolu hlobo, kufuneka ukuba kusetyenziswe izixhobo ezizinzileyo kulwakhiwo lwazo. Ukongeza, kufuneka ikwazi ukuvelisa amandla ayo kwaye ikwazi ukusebenzisa izixhobo zayo. Olunye lweempawu eziphambili ngokubhekisele kumandla azinzileyo kukusetyenziswa kweejenreyitha zelanga kunye neeparasas. Ngeepaneli zelanga ungasebenzisa amandla avela elangeni. Elinye icandelo lezindlu ezizinzileyo kukusetyenziswa kwakhona kwamanzi emvula. Iijenreyitha zinokudityaniswa ezinako ukugcina amandla omoya.
Nangona kunjalo, ayisiyiyo yonke into entle. Amaxabiso azinzileyo aneengxaki ezininzi. Mhlawumbi eyona ibaluleke kakhulu lixabiso lezixhobo. Kwaye eli xabiso libiza kakhulu kunezinto zesintu. Nangona kunjalo, ixabiso akufuneki lihlale liphezulu. Kukho abanye abayili bezakhiwo nabayili abaye bakwazi ukubuyisela izinto kwakhona ukuze iindleko zingabi phezulu kakhulu. Ukongeza, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba izindlu ezizinzileyo ziqala ukonga iindleko zonikezelo umgaqo uthelekiswa nekhaya lesintu. Oku kukwixesha elide kokonga okukhulu kwezoqoqosho nakwezendalo.
Izinto zokwakha izindlu ezizinzileyo
Kufuneka kuqala siqinisekise uthotho lwezinto zokuqala ukubona ukuba zeziphi iimfuno kunye neemfuno ezifunekayo ukwakha izindlu ezizinzileyo. Eyona nto icetyiswayo yile ilandelayo:
Lungisa uhlahlo-lwabiwo mali oluhambelana nohlobo lwekhaya ofuna ukulakha.
Thatha ingqalelo indawo yokuziqhelanisa nendlu ukuze ikwazi ukumelana nokuhla kweendleko zamandla.
Ukusebenza kwamandla kubalulekile xa usakha olu hlobo lwezindlu. Kukwabalulekile ukubandakanya ukusetyenziswa kwemithombo evuselelekayo.
Izinto zokwakha kunye nokusetyenziswa kufuneka zibekhona kwindalo iphela.
Amanzi kufuneka alawulwe ngengqiqo. Oko kukuthi, uninzi lwayo lunokuqokelelwa kuleyo iza ngemvula.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo yonke into kukuba, inemali eninzi.
Kwikhaya elizinzileyo, kubalulekile ukufumana intuthuzelo kokubini umoya kunye nomoya opholileyo. Unokuphumeza iimeko zokukhanyisa ngokukhululekileyo ngaphandle kokusebenzisa izinto ezininzi ezisetyenziswayo kwaye ufezekise inqanaba elifanelekileyo lokugquma kwesandi. Ngaphandle kwawo onke amanqaku ekuxoxwe ngawo, imeko yezoqoqosho iphambili. Apha ulawulo olulungileyo loyilo kunye noyilo luya kudlala ukuze ixabiso linganyuki kakhulu. Ukongeza, kuyathakazelisa ukuba uyilo lwendlu lunomtsalane.
Ukuze izindlu ezizinzileyo zibe nomtsalane kuluntu ngokubanzi, ixabiso lexabiso libaluleke kakhulu. Umboleki uyazi ukuba uyakulubuyisa utyalo-mali kwisithuba seminyaka ethile, ke uya kuba nakho ukuthwala iindleko eziphezulu zokwakha. Kuya kufuneka ibonakalise isixa sombane kunye namatyala amanzi aya kugcinwa ngokuhamba kwexesha.
Iintsapho ezizinzileyo zifuna ubutyebi bendalo kunye nezixhobo ezinokuphinda zisebenze. Ukuba kuyabiza kwaye kunzima ukufumana izinto eziyimfuneko ukuze usapho luqwalaselwe njengolungelelene nokusingqongileyo, intsingiselo yesenzo ayinakufezekiswa.
Ukusebenza kwamandla kwezindlu ezizinzileyo
Kungenxa yoko le nto ikhaya elizinzileyo kufuneka libalwe amandla alo okusebenza kunye nokubonelela kunye nokonga iindleko zokugcina ubomi bayo bonke obuluncedo. Ukusukela oko kwafunyanwa izinto zokuqala zokwakha, indlu inokuba neminyaka emininzi yobomi obuluncedo kunye nolondolozo ide iphinde isetyenziswe. Ukongeza kuyo yonke le nto, kubalulekile ukonwabela ikhaya elizinzileyo ngokokwakhiwa kwalo.
Isitshixo sokugcina amakhaya azinzileyo ngumgaqo wee-R ezintathu zozinzo: ukunciphisa, ukuphinda usebenzise kwakhona nokusetyenziswa kwakhona. Izixhobo zoncedo kunye nokusebenza kwetekhnoloji kufuneka kwandiswe.
Ayisiyiyo nje iiphaneli zelanga okanye ukuvuna amanzi emvula kwiimveliso zekhaya. Kuyacetyiswa ukuba usebenzise umoya ukomisa iimpahla endaweni yokusebenzisa isomisi esiwisayo, Kuyacetyiswa ukuba kuthathelwe ingqalelo ixesha lokukhanya kwaye ungachithi kakhulu. Kukho nabanini bezindlu eziluhlaza abasebenzisa izitiya zabo ukuba babe negadi yendalo kwaye banegalelo ekuhlonipheni umhlaba. Kuba indlela yokuphila yabanini bamakhaya eluhlaza ibaluleke kakhulu ekukhuseleni okusingqongileyo.
Uninzi lweemodeli ezisetyenzisiweyo
I-H & P, inkampani yokwakha yaseVietnam, yakha indlu ezinzileyo ukuze ithengisele amahlwempu. Uyilo lukhumbuza izityalo kwindawo eziyingqongileyo, ke indawo yokuma kwizitulo iphezulu kakhulu. Injongo yoyilo kukumelana nezikhukula ukuya kuthi ga kwi-1,5 yeemitha.
I-bamboo in bloom igubungela ummandla we-44 cubic metres kwaye yakhiwe ngezinto ezifumaneka kwalapha ekhaya ezinje ngoqalo, ifibreboard kunye namagqabi ecoconut, ke ukwakhiwa kwayo kulula kwaye kulula, kwaye kungasetyenziselwa ezoqoqosho ngabantu abasesichengeni.
Izitudiyo zeFougeron zoyilo ziyile zaza zakha indlu eqinisekisa ukuba ungaphila ubomi obuzinzileyo. Inesakhelo sobhedu esinika umoya wolwandle ukupholisa kwendalo kwaye ulungiselelo lwayo lubonelela ngokhuseleko olugqibeleleyo kwimililo. Enye yezinto ezilungileyo zeli khaya ziifestile ezonga amandla. Banoyilo olwahlukileyo oluvumela ukuba bavuselele umoya wendalo xa bevulekile. Enye yezinto ezikhethekileyo zayo kukuvula ngokuzenzekelayo komnyango. Oku kuyakunceda ukunciphisa isidingo somoya. Ekugqibeleni, indlu inenkqubo yokurisayikilisha amanzi eyenza ukuba ikwazi ukuzimela ngokupheleleyo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nezindlu ezizinzileyo kunye neempawu zazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Izindlu ezizinzileyo
Kutheni kubalulekile ukuphinda kusetyenziswe kwakhona